Abaninzi abasandul 'ukufumana uphando lozalo lovulo bayavuya xa befumanisa ukuba amaninzi emagama emndenini wabo ayatholakala kwi-Intanethi. Ukuziqhayisa ngokufezekiswa kwabo, balayishe yonke idatha abayifumanayo kwimithombo ye-intanethi, bayifake kwi-software yabo yobuzalo kwaye baziqhenyise ngokuqala ukwabelana "nomnombo wokuzalwa" wabo nabanye. Uphando lwabo ke lwenza indlela yalo kwimigca yolwazi olutsha kunye neqoqo, ukuqhubeka nokuqhubela phambili "umthi wentsapho" entsha kunye nokuphucula naziphi na iimpazamo ngexesha ngalinye umthombo ukopishwa.
Ngelixa lizwakala likhulu, kukho ingxaki enkulu enkulu kule meko; oko kukuthi ulwazi lwentsapho olushicilelwe ngokukhululekile kwiinkcukacha ezininzi ze-intanethi kunye neeWebhsayithi zihlala zingenakutshintshwa kwaye zichanekile. Nangona iluncedo njengenkcazelo okanye iqalo lokuqalisa uphando oluthe gqolo, idatha yemithi yentsapho maxa wambi iyingcamango ngaphezu kweqiniso. Nangona kunjalo, abantu bahlala bephatha ulwazi abayifumana njengeyona nyaniso yeendaba ezilungileyo.
Oko akuthethi ukuba yonke i-intanethi yolwazi lomnxeba ayibi. Ngokuphambene noko. I-Intanethi ngumthombo omkhulu wokulandelela imithi yentsapho. Iqhinga kukufunda indlela yokuhlukanisa idatha efanelekileyo ye-intanethi kwizinto ezimbi. Landela le nyathelo ezintlanu kunye nawe ungasebenzisa imithombo ye-Intanethi ukulandelela ulwazi oluthembekileyo malunga nookhokho bakho.
Inyathelo lokuqala: Khangela uMthombo
Ingaba iWebhu yekhasi okanye i-database yobhaliso lwe-genealogy database, yonke idatha ye-intanethi kufuneka ifake uluhlu lwemithombo.
Igama eliphambili apha lifanele . Uya kufumana ezininzi izibonelelo ezingenayo. Emva kokuba ufumene irekhodi yakho enkulu, omkhulu utata inthanethi, nangona kunjalo, inyathelo lokuqala kukuzama ukufumana umthombo wale nkcazelo.
Khangela iziqendu zenkcazelo kunye neenkcukacha-ngokuqhelekileyo zibonwe njengengcaciso engaphantsi kwiphepha, okanye ekugqibeleni (iphepha lokugqibela) lopapasho
Khangela amanqaku okanye amazwana
Cofa kwikhonkco kwi "malunga nale datha" xa uphando kwiziko leenkcukacha zoluntu (Ancestry.com, Genealogy.com kunye ne-FamilySearch.com, umzekelo, zibandakanya imithombo yolwazi lwabo oluninzi)
Mthumelele igalelo lomnatha, nokuba ngaba yinkampani yeenkcukacha okanye umlobi wentsapho yomntu, kwaye ucele ngobuchule ulwazi lwabo lomthombo. Abaphandi abaninzi baqaphele ukupapasha umthombo we-intanethi (ukwesaba ukuba abanye "bayaba" ityala kumsebenzi wabo ophangaleleyo), kodwa bazimisele ukuwabelana nawe ngasese.
Inyathelo lesibini: Landela phantsi uMthombo okhankanyiweyo
Ngaphandle kokuba iWebhsayithi okanye i-database ibandakanya imifanekiso yedijithali yomthombo wangempela, isinyathelo esilandelayo kukulandelela umthombo okhankanywe wena.
Ukuba umthombo wolwazi ngumqulu wezofuzo okanye ibali lembali, ngoko unokufumana ilayibrari kwindawo edibeneyo ikopi kwaye ulungele ukubonelela ngeefotokopi ngenkokhelo encinci.
Ukuba umthombo ungumrekhodi we-microfilm, ngoko kubhetele kakuhle ukuba iThala leNcwadi yeMbali yaLapho. Ukukhangela ikhathalogu ye-intanethi ye-FHL, nqakraza kwiThalayibrari, ngokoKhathalo lweeNcwadi zoLwazi lweMbali. Sebenzisa indawo yokukhangela idolophini okanye isithili ukukhupha iirekhodi zamathala eencwadi kuloo ndawo. Iirekhodi ezidibeneyo ziyakwenyelwa kwaye zijongwa kwiNgingqi Yakho Yembali Yentsapho.
Ukuba umthombo uyi-intanethi kwi-intanethi okanye kwiWebhsayithi, ubuyele kwiNyathelo # 1 ubone ukuba ungayilandela phantsi umthombo wolwazi lwelo lwazi.
Inyathelo lesithathu: Khangela Umthombo onokwenzeka
Xa i-database, iWebhsayithi okanye igalelo ayinikezeli umthombo, lixesha lokujika. Zibuze ukuba luhlobo luni lwerekhodi olunokuba lunikwe ulwazi olufunyenweyo. Ukuba ngumhla oza kuzalwa ngawo, ngoko umthombo unesiqinisekiso sokuzalwa okanye ukubhaliswa kwetye. Ukuba ngaba unyaka wokuzalwa, oko kusenokwenzeka ukuba ivela kwingxelo yoluntu okanye irekhodi lomtshato. Ngaphandle kwereferensi, idatha ye-intanethi inokunika iinkcukacha ezaneleyo kwixesha kunye / okanye indawo ukukunceda ukuba ufumane umthombo ngokwakho.
Ikhasi elilandelayo > Amanyathelo 4 no-5: Ukuphonononga imithombo kunye nokuxazulula iingxabano
<< Emuva kwiNyathelo 1-3
Inyathelo lesine: Hlaziya uMthombo kunye nolwazi olubonelelayo
Nangona kukho inani elikhulayo leenkcukacha ze-intanethi ezibonelela ukufikelela kwimifanekiso yemifanekiso yamandulo, ininzi yolwazi lokuzalwa kwemveli kwiWebhu livela kwimithombo ephuma kwimithombo-iirekodi ezithe zafunyanwa (zikopishwe, zichazwe, zibhalwe, okanye zishwankathelwe) zisuka ngaphambili imithombo ekhoyo, yangaphambili.
Ukuqonda umahluko phakathi kwezi ntlobo zemithombo eyahlukeneyo kuya kukunceda ukuba uvavanye kakuhle indlela yokuqinisekisa ulwazi olulutholayo.
Ingaba kufutshane nerekhodi yangaphambili ingumthombo wakho wolwazi? Ukuba kukho ikopikopi, ikopi yedijithali okanye ikopi ye-microfilm yomthombo wokuqala, ngoko kuya kuba ngummeli ovumelekileyo. Iirekhodi ezidibeneyo - kubandakanywa izibhengezo, iinkcazo zeenkcukacha, iimbosi kunye neembali zeentsapho ezishicilelweyo-zinokuthi zineenkcukacha ezingekhoyo okanye iimpazamo zenguqulelo. Ulwazi oluvela kulezi ntlobo zemithombo esekelwe kufuneka lilandelwe kwakhona kwimvelaphi yangempela.
Ingaba idatha ivela kwingcaciso ephambili? Olu lwazi, oludalwe okanye lusondele kwixesha lomcimbi othile ngumntu onolwazi lomcimbi (oko kukuthi usuku lokuzalwa olunikezelwa ngugqirha wosapho kwisatifikethi sokuzalwa), ngokuqhelekileyo kunokwenzeka ukuba kuchanekile. Ulwazi oluqhelekileyo, ngokuchaseneyo, lusetyenziswa ixesha elibalulekileyo emva kwesiganeko esenzekayo, okanye ngumntu ongekho kwisiganeko (oko kukuthi umhla wokuzalwa ukhankanywe kwisiqinisekiso sokufa ngentombi yomfi). Ulwazi oluphambili ngokuqhelekileyo luthwala ubunzima ngaphezu kolwazi lwesibini.
Inyathelo lesithandathu: Sombulula iingxabano
Ufumene isitifiketi sokuzalwa kwi-intanethi, uhlolisise umthombo wokuqala kwaye yonke into ibonakala ilungile. Sekunjalo, umhla uxabana neminye imithombo oyifumene uyihlo. Ngaba oku kuthetha ukuba idatha entsha ayithembekile? Akunjalo. Kuthetha nje ukuba ngoku kufuneka uphinde uphinde uhlalutye ubungqina bobuqhetseba ngokubhekiselele kwimeko yokuba uchaneke, isizathu sokuba wadalwa kwindawo yokuqala, kunye nokubambisana nabanye ubungqina.
Zingaphi amanyathelo yile data evela kumthombo wasemvelaphi? Isiseko sedatha kwi-Ancestry.com esivela kwincwadi enyathelweyo, eyabhalwa kwiirekhodi zangaphambili kuthetha ukuba isiseko se-Ancestry sinyathelo ezimbini kude nomthombo wokuqala. Isinyathelo ngasinye esongezelelweyo sandisa amathuba okuphulwa.
Umcimbi wawubhalwe nini? Ulwazi olurekhodiweyo kufutshane nexesha lomcimbi luyakwazi ukuchaneka.
Ngaba kukho na ixesha elidlulileyo phakathi komcimbi kunye nokudalwa kwengxelo echaza iinkcukacha zayo? Iingxelo zeBhayibhile zentsapho zenziwe zenziwe ngexesha elilodwa, kungekhona ngexesha leemeko zangempela. Ilitye lokungcwaba liye lafakwa kwingcwaba yonyaka ukhokho emva kokufa kwakhe. Ingxelo yokuzalwa yokulibaziseka inokukhutshwa iminyaka emininzi emva kokuzalwa kwangempela.
Ingaba uxwebhu lubonakala luguqulwe ngaluphi na uhlobo? Ukubhalwa ngesandla ngokubhaliweyo kunokuthetha ukuba ulwazi longezelelwe emva koko. Iifoto zedijithali zinokuba zihleliwe. Akuyinto evamile, kodwa kwenzeka.
Abanye bathi ntoni ngomthombo? Ukuba yincwadi epapashwe okanye idatala kunokuba irekhodi yasekuqaleni, sebenzisa injini yosesho lwe-intanethi ukubona ukuba ubani oye wasebenzisa okanye waphawula ngolu hlobo. Le ndlela yindlela ekhethekileyo yokufumanisa imithombo enenani elikhulu leephene okanye ukungalingani.
Elinye lokugqibela! Kungenxa yokuba umthombo ushicilelwe kwi-intanethi yintlangano ehloniphekileyo okanye iqumrhu akuthethi ukuba umthombo ngokwawo uye wahlolwa kwaye uqinisekiswa. Ukuchaneka kwanoma iyiphi i-database, ngokusemgangathweni, kulungile nje njengowomthombo wedatha. Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yokuba inyaniso ibonakala kwiphepha lomntu okanye i-LDS ifayile ye-Ancestral, ayithethi ukuba kungenzeka ukuba yinto engalungile. Ubunyani belo lwazi luxhomekeka kakhulu kwiinkathalo kunye nekhono lomphandi, kwaye baninzi abanomdla wobubele bokupapasha uphando lwabo kwi-intanethi.
I-Cherokee Princess Myth
Indlela Yokuqala Ukulandelela Umthi Wentsapho Yakho
I-Ellis Island Immigration Centre
Imbali kaKing Kong kwisikrini
Sithi Hello To Pajama Kid, Omnye Umntwana Othakazelisayo Oye waziwa ngeNtanethi